चुनावपछि के संविधान लेखिन्छ त ? | Chitwan Post Daily
Updated: २६ कार्तिक, २०७०
चुनावपछि के संविधान लेखिन्छ त ?
२६ कार्तिक, २०७०
देश चुनावमय छ । नेताहरुको दिमाग पनि चुनावमय छ । दोस्रो हो कि अर्को हो, चुनाव मुखमा छ । निर्वाचन आयोगले अर्को चुनाव भनेको चारै दलको चुनावी घोषणापत्रले दोस्रो भनेको छ । आखिर हुन लागेको यो संविधानसभाको चुनाव दोस्रो हो कि अर्को हो ! सुन्दा उस्तै ध्वनित हुने, तर गुन्दा फरक अर्थ लाग्ने यी दुवै शब्द बेग्लै अर्थमा प्रयोग हुन्छ । अर्को शब्दको अर्थ रहन्छ– एकदेखि भिन्न, अरु अन्य बेग्लै र बिरानो दोस्रो शब्दको अर्थ हो, पहिलोभन्दा पछिको । त्यसैले, प्रश्न तड्कारो छ– यो हुन लागेको संविधानसभाको चुनाव दोस्रो हो कि अर्को हो ?
दलहरु त जे पनि भन्छन् र गर्छन्, उनीहरुको विश्वास गर्ने आधार नै छैन नेपाली जनतासँग । चुनाव आयोगका सबै आधिकारिक दस्तावेजमा अर्को शब्द हुनुले यसको सोझो र सापट अर्थ हो, मंसिर ४ मा हुन लागेको चुनाव संविधानसभाको अर्को हो भनेर बुझ्नुप¥यो जनताले । दोस्रो शब्द राखेर अबको चुनावबाट खडा हुने संविधानसभा पहिलाकै निरन्तरता हो भन्ने माने र ठाने दलहरुले । तर, चुनाव आयोगले अर्को भन्ने शब्द राखेर नितान्त नयाँ आफ्नो काम शून्यबाट सुरू गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । यसरी आयोग र दलहरुको बीचमा नै सहमति र एकरुपता छैन भने चुनावपछि निर्माण हुने संविधानसभाले सहमतिमा पुगेर नेपाली जनतालाई संविधान दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
निर्वाचन भनेकै नयाँ जनादेश हो । आउने नयाँ जनादेश बोकेर काम गर्ने पुरानो र असफल संविधानसभाले जम्मा पारेको फोहोरमैला सफा गर्ने । न त्यो तर्कसंगत छ, न विधिसम्मत । विडम्बना पनि कति देख्नुपर्ने ? नयाँ निर्वाचन रे । नयाँ उम्मेदवार रे । नयाँ मतदाता रे । कामचाहिँ पुरानाले गरेको फोहोरको डंगुर तह लगाउने । यो त मतदाता र निर्वाचन पद्धतिको घोर अपमान हो । त्यही कारण, निर्वाचन आयोगले सोचविचार पु¥याएर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन नभनेर अर्को निर्वाचन भनेको हो । दोहो¥याएर संविधानसभाको चुनाव नहुने भएकाले निर्वाचन आयोगले विश्वका विभिन्न भागमा भएका चुनावको अनुभवको लाभ उठाएर यो शब्दको चयन गरेको हो ।
हेर्दा लाग्छ, चुनावपछि पनि नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना छैन । संघीयताको सवालमा आ–आफ्नो अडानमा देखिएका दलहरु सहमतिमा पुग्छन् भन्ने देखिँदैन । शासकीय स्वरुपबारे पनि उनीहरु आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पहिलेजस्तै विभाजित नै छन् । यी दुवै मुद्दाले गर्दा नयाँ संविधान बन्ने देखिँदैन । यी मुद्दाहरु मिलाउँदै जाने योग्यता र दक्षता हाम्रा नेताहरुमा छैन । त्यसैले, नयाँ संविधानसभाबाट पनि नयाँ संविधान आउन सक्दैन ।
विचारणीय विषय कहाँनेर छ भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै मानसिक परिवर्तन हुनुपर्ने हो । मुख्यतः मानसिक परिवर्तन नै हो । हाम्रोमा ठीक उल्टो भइदियो, नेपाली जनताचाहिँ मानसिक रुपमा परिवर्तन भए । तर, हाम्रा नेताहरु पटक्कै हुन सकेनन् । देशमा देखिएका यावत् समस्याको जड यही हो । सयौँ वर्षदेखिको उत्पीडित भावनालाई बन्दुकसँग माओवादीले जसरी जोड्यो, त्यो अहिलेको अग्रगमनको महान् यात्रामा पुरातन मानसिकताको खाडलभित्र पुरियो । मानसिक परिवर्तन नभई राज्य पुनर्संरचनाको परिवर्तन गर्न खोज्नु दर्शन र विज्ञानसम्मत देखिँदैन । यसरी चेतनामा परिवर्तन नआएकै कारण परम्परागत मानसिकताकै उपज राजनीतिक पार्टीहरुको शब्द पहिलो संविधानसभाले नेपाली जनतालाई संविधान दिन नसकेको तीतो यथार्थ ताजै छ । अब यो चुनावको कल्याङमल्याङले अर्को संविधानसभा निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
दृश्य÷अदृश्य जे भए पनि मुख्य विषय डरलाग्दो कहाँनेर बन्यो भने साउथ ब्लकको आदेशमा चार दल र खिलराज रेग्मीको सरकारले सेना परिचालन चुनावमा गराउने जुन निर्णय ग¥यो, त्यसले देशलाई नै असफल बनाउने काम ग¥यो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सेनाको भूमिका कतिबेला आउँछ भन्नेसम्म नबुझी सेना ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्नु कतिसम्म खतरा छ ! सेनाले चुनाव हामीले गरायौँ, अब संविधान नलेखेसम्म ब्यारेकभित्र पस्दैनौँ, देश शान्तिमय छैन भनिदियो भने स्थिति कहाँ पुग्छ ? राजनीतिक नेतृत्वको अभावले नै मुलुकविरोधी शक्ति सलबलाइरहेको र देश नै खलबलाइरहेको यो बेला यस्तो खाले अचेतनले देश नै खाडलमा जाकिने प्रस्ट छ ।
नाटकै मञ्चन भए पनि देश चुनावमय छ । राज्यव्यवस्था संस्थागत गराउने संविधान लेख्ने भनेर, हुन पनि हो जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, स्रोत र साधनमाथि जनताको अधिकार स्थापित गर्ने, यावत् सवाललाई सम्बोधन गर्ने कार्य संविधान लेखनले गर्छ । यो संविधानसभाको चुनावपछि संविधान बनाउन सक्ला ? यही स्वरुप र संरचना रहेसम्म त्यसले कुनै हालतमा संविधान बनाउन सक्दैन, तर नेताहरु नबनाई छोड्दैनौँ भनेर कम्मर कसेर चुनावमा लागेका छन् । हिजो तिनै नेता जसले लाजै नमानी संविधानसभाको हत्यामा आफू पनि मतियार भएको सकारेका थिए । आज एक वर्षभित्रै ती नेताहरु मानसिक रुपमा परिवर्तन भए भनेर कसरी विश्वास गर्ने ! फेरि पनि चुनावी नाटक त मञ्चन भइरहेछ नि । निर्वाचन त प्रक्रिया मात्र हो नि, परिणाम त संविधान हो । त्यसैले, सेना परिचालन गराएर संविधानसभाको यो दोस्रो हो कि अर्को चुनाव सम्पन्न गर्नुमात्र ठूलो विषयवस्तु होइन, संविधान लेख्नुचाहिँ देश र जनताको लागि आजको आवश्यकता हो । त्यसैले, द्रव्य–पिचास नेताजीहरु मानसिक रुपमा परिवर्तन होऊन् । देश र जनता सदाका लागि बाँच्न पाऊन् । आगे द्रव्य–पिचास नेताजीहरुमा चेतना भया !